ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ ~ စန္ဒကူး
မ၀ါ Tag ထားတာရေးပါ့မယ်။ ကူးချစ်သူတောင်မသိသေးတဲ့အကြောင်းရာမို့ သူ့ကိုပါ ဒီနေရာက နေ ကြို တောင်းပန်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကူးကူး ၉တန်းရောက်တော့ရန်ကုန်ပြောင်းရတယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်းကျောင်းနေဖက်တွေနဲ့ခွဲရတော့ငိုလို့မဆုံးပေါ့။ အဲဒီအထဲမှာ မအိ လို့ခေါ်တဲ့ အိအိအောင် (သူ့အမေနဲ့ ကျွန်မအမေ ဆေးရုံကြီးမှာ အခန်းတူတစ်ရက်ခြား ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကိုမွေးခဲ့ရာကတည်းကခင်ကြတာပါ) နဲ့ ကိုဖြိုး လို့ခေါ်တဲ့ လှိုင်ဖြိုးထက် (ကျွန်မမူကြိုတက်ချင်လို့ တမာပင်ပေါ်ချောင်းကြည့်တုန်းသူတွေ့သွားပီး သူ့အမေကိုအတင်းဝယ်ခိုင်းရာက သူ့အမေကျွန်မတို့ဆီရောက်လာ ရင်းနဲ့ခင်သွားတာ) ကိုတော့ အလွမ်းဆုံးပဲ။
ရန်ကုန်ရောက်တော့ ကျောင်းအသစ် သူငယ်ချင်းတွေအသစ်မှာ ကိုယ်က senior ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပီ။ အဲဒီအချိန် သူငယ်ချင်းမလေးတွေက ဟေ့...လာပီလာပီ.. ဘယ်ညာ..ဘယ်ညာ...နဲ့လှမ်းအော်ကြတော့ ကျွန်မလဲ ယောင်ပီး လှမ်းကြည့်မိတော့ ဘောင်းဘီနက်ပြာအရှည်လေးနဲ့ အိကျီကော်လံအဖြူလေးနဲ့ ဖြူရှည်ရှည် ကောင် လေးတစ်ယောက် စာအုပ်လေးကို လက်မှာဆုပ်ကိုင်ထားပီး လျှောက်လာတာတွေ့လိုက်တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကပြောတာ အဲဒီကောင်လေးက ချင်းတောင်ကလာတာဆိုပဲ၊ စာအရမ်းတော်တယ်၊ သူက ၈ တန်း၊ မာနာကြီးတယ်၊ စကားနည်းတယ်။ ဂီတာတီးအရမ်းတော်တယ်တဲ့။ သူက ကျွန်မတို့ဘုရားကျောင်းက ဆရာကြီး ကြီး ရဲ့ တူလို့ပြောကြတယ်။ ကျွန်မလဲ သတိသိပ်မထားမိခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ထက်လဲအတန်းကငယ်၊ အဲဒီအရွယ် ဘာဆိုဘာမှကိုမသိသေးတာ။ နောက်တော့မှတ်မှတ်ရရ ၁၀ တန်းလောက်မှာ ဘုရားကျောင်းမှာ ပြဇတ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ ကျွန်မနဲ့သူ့ကို ပြဇတ်ဦးဆောင်တဲ့ဆရာမကတွဲပေးတယ်။ သူနဲ့ကျွန်မက ချစ်သူရည်း စားတွေပေါ့..ကျွန်မကငွေမက်တယ်.. အဲလိုသရုပ်ဆောင်ရတာ.. ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်လို့ ဆုပေးတိုင်း သူအမြဲ ဆုရ သလို၊ ကျွန်မလဲရတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေဆိုရင် အရှေ့မှာအတူထိုင်ရတော့ အချင်းချင်းပိုသိလာတယ်။ စကားတော့ သိပ်မပြောဖြစ်သေးဘူး။ နောက်ပိုင်းဘုရားကျောင်းမှာသီချင်းဆိုတာများလာတော့ သူလဲကျွန်မ သီချင်းဆိုတိုင်း ဂီတာတီးပေးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ သီချင်းမဆိုခင်အတူထိုင်တယ်။ စကားတွေပြောတယ်။ ကျွန်မကသူ့ကို အမြဲ ဂေါက်တယ်လို့ပြောတယ်။ အနုပညာသမားတွေက တစ်နည်းနည်းနဲ့ ကြောင်ကြတယ်မဟုတ်လားနော်။ အမှန်က ကျွန်မလဲ နဲနဲတော့ ဂေါက်ပါတယ်။ သူကတော့ပြောတယ်.. မသိရင် တော့မာနကြီးသလိုလိုနဲ့ သိရင်တော့ ငပေါလေး တဲ့....
နောက်ပိုင်း ကျွန်မတက္ကသိုလ်ရောက်တော့ သူလဲ ကျောင်းထွက်ပီး ရိုးရိုးအစိုးရကျောင်းကို ပြန်ပြောင်းသွားတယ်။ မတွေ့ဖြစ်တော့ပေမယ့် ဒုတိယနှစ်အပီးအိမ်ပြန်တော့ တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်အကိုကြီးတစ်ယောက် သီချင်းဆိုဖို့အိမ်မှာလာပြောတော့ အားလဲအားနေတာနဲ့ သီချင်းဆိုမယ်ဆိုပီး နတ်မောက်လမ်း စတူဒီယိုမှာ သီချင်းသွားသွားကျင့်တယ်။ ရခိုင်ဖက်က အကိုကြီးတစ်ယောက်လဲ သူစပ်ထားတဲ့သီချင်းတွေ အခွေထုတ်ဖို့ သီချင်းဆိုပေးဖို့ကမ်းလှမ်းတာနဲ့ အတူတူဘဲ သူနဲ့ ကျွန်မ သီချင်းကျင့်တဲ့စတူဒီယိုအမြဲသွားဖြစ်တယ်။ တစ်ယောက်တည်းအပြင်ထွက်ဖို့ အိမ်ကခွင့်မပြုတာမို့ သူလာခေါ်ရင် မာမီတို့က ငယ်သူငယ်ချင်း မျက်စေ့အောက် မှာကြီးလာသူတွေဆိုတော့ အတူတူသွားခိုင်းတယ်။
သူက ကဗျာဆရာလဲဟုတ်သလို၊ ဂီတသမားလဲဟုတ်တယ်၊ ပန်းချီလဲဆွဲတယ်။ အနုပညာသမားပီပီ သူကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးကလဲ ဆံပင်လေးရှည်ရှည်နဲ့ ကနွဲ့ကလျ..ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ နူးညံ့ စကားကိုချိုအီပျော့ပြောင်း ပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ ကျွန်မထင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကယ်လည်းသူတို့စာအဆက်သွယ်ရှိကြတယ်။ ကျွန်မနဲ့ကတော့ထုံးစံအတိုင်း သွားအတူ၊ လာအတူ... မကျေနပ်တာ၊စိတ်ဆိုးတာမှန်သမျှ သူ့ကိုအကုန်ပြော ပြလို့ ရတယ်။ သူကတော့ အမြဲနားထောင်တယ်။
ကျောင်းပီတော့ ကျွန်မဆေးရုံတက်ရတယ်။ ဆေးရုံကိုနေ့လည်ဆိုသူအမြဲရောက်ရောက်လာတယ်။ ဟာသစာအုပ် လေးတစ်အုပ်နဲ့ တစ်ခုပီးတစ်ခု လာလာဖတ်ပြတယ်... သူကဆေးရုံကို နေ့စောင့်ပေါ့.. အဲဒီအချိန် မာမီက အပြင်ထွက် ၀ယ်စရာရှိတာဝယ်...
အဲဒီအထိကို ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ သူကျွန်မကိုချစ်နေမယ်... စိတ်ဝင်စားနေမယ်လို့လုံးဝ လုံးဝ ကိုမထင်ခဲ့ပါဘူး....
ကျွန်မအနေနဲ့လည်း သူကျွန်မဘေးမှာမရှိရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလဲမတွေးမိခဲ့သေးဘူးပါဘူး...
အဲဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ အိမ်ကိုလာလာလည်ရင် သူကြိုက်တယ်လို့ ကျွန်မထင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ အတူ လာလာနေတော့ ကျွန်မလဲ အေးပေါ့..သူကောင်မလေးကိုဖွန်ကြောင်ပီးလည်စရာအိမ်မရှိလို့ ကျွန်မတို့အိမ် ရောက်လာတယ်ထင်ခဲ့တာဘဲ...
ကျွန်မအမေအဖေကလဲ သူအဲဒီကောင်မလေးကိုကြိုက်နေတယ် ပုံသေမှတ်ထားပီး..ကျွန်မနဲ့ ခင်မင်တာကို ဘာမှ စိုးရိမ်စိတ်မရှိခဲ့ဘူး....
နောက်..အမေဖေအိမ်ပြောင်းပီး... ကျွန်မအလုပ်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နေခဲ့တော့ သူဘဲ အစစရာရာ လိုက်ကူညီလုပ်ပေး..တစ်ကယ်ပါ..ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်မသိရင် မောင်နှမအရင်းတွေလိုပါဘဲ..
တစ်ခုရှိတာ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ချို့က ကရင် ဆိုတော့ ချင်းဖြစ်တဲ့ သူ့ကို လူကိုမမုန်းဘူး..လူမျိုးကို မကြိုက်တာ.. ဒီလိုဘဲ... သူ့ဘက်က လူတွေကလဲ ကျွန်မက ကရင်သွေးနဲနဲပါတော့ မကြည်ကြဘူးဆိုပါတော့..
ဒါတောင်ရည်းစားတွေမဖြစ်သေးဘူး... သူတို့အမြင်မှာတော့ ဘုရားကျောင်းတက်လဲ အတူထိုင်...ဟိုနားဒီနားသွား လဲသူကနောက်ကအမြဲလိုက်ပေးဆိုတော့ တစ်မျိုးမြင်လဲမြင်မပေါ့..
ဒါနဲ့ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ ခန့်မှန်းကောက်ချက်ချသံတွေတစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့် အိမ်ကိုရောက်သွားတော့
မာမီ ၊ ပါးပါးနဲ့ မောင်လေးညီမလေးက စိတ်ဆိုးပီးအသည်းသန်ကန့်ကွက်ကြပါလေရော...
ကျွန်မလောက်ဖြေရှင်းရမှာမုန်းတာမရှိဘူး... ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာ စကားမပြောနဲ့ အတူမသွားနဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ အတူမထိုင်နဲ့..စသည်ဖြင့်...
ကဲ..ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း...ပြတ်ရအောင်ရည်းစားလဲမဟုတ်... အိမ်ကမကြိုက်လို့ နင့်ကိုမခေါ်တော့ဘူး ပြောရ အောင်လဲ သူနဲ့ကျွန်မက ရိုးသားခင်မင်တာက ဘယ်အဆင့်မှလဲမရောက်...သူ့မှာလဲ ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေး ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်မလဲသိထားတယ်လေ..
အဲဒီမှာ ကျွန်မ ဦးလေးလူပျိုကြီးက မာမီ့ကိုပြောပါတယ်.. အဲဒီကောင်လေးက သူနဲ့အတူလာတဲ့ကောင်မလေး ကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး..သူကြိုက်နေတာ...ဘယ်သူ...ဘာညာဆိုပီး ပြောလိုက်ရာက...
ကျွန်မလဲ အရမ်းခေါင်းမာ ပီး စိတ်တိုပီးဆန္ဒပြပါတယ်..
မောင်လေးနဲ့ညီမလေးလဲ ကျွန်မကို စကားမပြောတော့ဘူး...
ကျွန်မကလဲ ကိုယ်ရိုးရိုးသားသားခင်မင်တာ၊ အဲဒီကောင်လေးက လူဆိုးမဟုတ်တာလဲသူတို့သိတယ်၊ နှစ်ယောက် လုံးမျက်စေ့အောက်မှာတင်ကြီးလာတာ.. အဲလိုလုပ်ရကောင်းသလားဆိုပီးပေတေပီး သူနဲ့ဆက်ခင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမလေးရှားထွက်သွားပါတော့တယ်... အဲဒီချိန်မှာပြသနာတွေအေးသွားတယ်...
သူပြန်ရောက်ပီးတစ်ရက်မှာ... ကျွန်မကိုလာတွေ့တဲ့အချိန် ကျွန်မကလဲဒီဖက်ကိုအလုပ်နဲ့ထွက်လာခါနီး ဆေးစစ်ထားတဲ့စာရွက်စာတန်းတွေ traders မှာရောက်နေတဲ့စာရင်းစစ်ကိုသွားအပေးမှာ... ကျွန်မနဲ့သူ ကို ကြည့်မရသူများထဲက နှစ်ယောက်က အတိုင်ဖောက်ညီညီနဲ့ ကျွန်မ ညနေပိုင်းကြီး ဟော်တယ်မှာ foreingner နဲ့သွားတွေ့တယ်ပြောလိုက်တယ်....အဲဒီလွဲမှားမှုကို ကျွန်မသိလိုက်ရတာ ပီးခဲ့တဲ့လ ကမှပါ... ဘယ်လောက် အချိန် တွေကြာခဲ့ပီလဲ.. ဘယ်လောက်ထိ သူကျွန်မကိုမပြောဘဲ အဲဒါကိုအစိုင်ခဲတစ်ခုလို ရင်ထဲမှာ ထည့်ထား လဲဆိုတာ သူကလွဲပီးဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ..
ကျွန်မကတော့ထုံးစံအတိုင်း....မရှင်းပြနေတော့ပါဘူး.. ဖြစ်သမျှအကြောင်းးးအကောင်းလို့သာ မှတ်လိုက်ပါတော့ တယ်။
ဆက်ပီး Tag လိုက်ပါတယ်..
၁။ မြူးစ်
၆။ မေလေးစ်
တစ်သက်တစ်ကိုယ် tag ဖူးသည်ရှိအောင်ပါ..နော်.. ရေးပေးကြပါ.. တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေတော့ သူများတွေ tag ထားတာတွေ့လို့ ထပ် မထည့်တော့ပါဘူး..း)
Posted by စန္ဒကူး at 1:41 AM
ပထမ ၀င်ယူရမှာတောင် ခပ်လန်.လန်.ရယ် အောက်မှာ
နာမည်ကြီးတွေ.နေလို. ... အင်းဗျာ ဖတ်ရတာတော.
ကောင်းတယ်ဗျ ... သူငယ်ချင်းတွေ စကားမပြောတာ
တော.ဆိုးတယ်နော် ငယ်ပေါင်းဆိုတော. ပိုဆိုးတယ်ဗျာ...
ထပ်ပြီးတော.တော. ပြောတော.ပါဘူး တော်ကြာ ချစ်သူနဲ.
ရန်ဖြစ်နေမှာစိုးလို. ... တဂ်ထားတာ ရေးပေးမယ်နော်
ခက်တာက ပန်းကတပွင်.လည်း မဟုတ်ဘူး နှစ်ပွင်.လည်း
ဟုတ်ဘူး အများကြီးလည်းဟုတ်ဘူး ... ဆိုတော.ကာ
မကြာမီ လာမည်မျှော် ပေါ. အဟတ် :P
တခါတရံမှာရင်ထဲရှိတာတွေ၊စိတ်မကောင်းတာတွေဇွင့်ပြောတာကောင်းပါတယ်ချစ်သူ။ လူမှန်ရင်ခံစားချက်နဲ့ မကင်း တဲ့အတွက်မချုပ်ချယ်ပါဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေး လို့ ရပါတယ်။
"The value ofaman is defined by how he control his power".
I have power to stop you does not mean I will use it all time to control your freedom.
Be open and free. And be Happy!
ဘလော့မရှိတာ ဒါတွေကောင်းတယ် ဟိဟိ ..
ပြဿနာက နုနုညံ့ညံ့နဲ့ ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ။
သူကလည်း ရင်ထဲမှာ ရှိတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရင်
ဇာတ်လမ်းက စောစောစီးစီး တမျိုးဖြစ်သွားမှာလေ။
သူငယ်ချင်းကောင်း တယောက်က တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးမှဆိုတော့ ညီမလေးလည်း စိတ်ကောင်းမှာ မဟုတ်ဖူးနော်။
ဟင် တဂ်လိုက်ပြီလား။ ကူးဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်သွားတယ်။ရေးမယ်နော် စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ် ကြာမလားမသိဘူး ဟီးဟီး။ ရင်ထဲက ပန်း...
ကိုကို ဆူတော့မယ် ..နှုတ်ခမ်း..
ကောင်မလေး တယောက် ချော့ရတော့ပါမယ်..
မမရေ ဇတ်လမ်းလေးက လွမ်းဖွယ်...
အင်း.... လွမ်းစရာ ဇတ်လမ်းလေး ပဲနော်...။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ...။ ခုချိန်မှာ ကူးစ် မှာလဲ ချစ်ရတဲ့သူ ရှိနေပြီပဲနော်...။ သူ့ မှာရော.....း))
ကူးစ်
ငါကိုတက်ဂ်တာလားဟင်။ မမဝါလဲ တက်ဂ်ထားတယ်လေ။ ဟိဟိ
ချစ်လို့ တက်ဂ်တာဘဲ ရေးပေးမယ်နော်။ လူဇိုးးး ရှော့ရှိတယ်ဟ။
ကူးစ် ရေ အဲဒီကောင်လေးရော အခုဘယ်မှာလဲဟင်။
နင်ကိုကို ကို ချော့ပေတော့ဟေးးး
ကူကူး တစ်ယောက်တည်းလား ဥဥ ရေးသလိုမျိုးမရေးနဲ့နော်
ကောင်းဝူး ဟီးဟီး စတာနော်